Wonbadeen Hin Dhiiftuu..! – Welcome to bilisummaa
Bara maraa yaana
Gaafa guyyaan geette
Taphaan ala taana!
Wonbadeen hin dhiiftuu
Tan bosona yaate
Lafarraa nu haaddee
Yaa lammii arginee
Karaan kun nu hin baasuu
Worri qawwee baree
Qawwee malee hin bu’uu
Kanaan malee hin dhufuu
Nu saamaa moo’attii
Hoo’ifnaaf maaddii !
Amma gahee agarree
Karaan kuni nu hin baasuu
Haa jijjirruu daandii
Abbaan cidhaa jaraa
Amma nutti haa hafuu
Qabsootti haa kaanuu
Nuti abbaan dhimmaa !!!
Tags Eyhiopia filmaata Sagalee
Previous Oromo: A blessed nation confronted with paradoxes
Next Barattoonni Yunversiitii gara garaa akka sagalee hin kennine ugguraman jedhu